Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya Oo Xooga Saarayo Dhismaha Ciyaartooyda Da’da Yar – Goobjoog News
Xiriika kubbadda cagta Soomaaliya ayaa qaatay siyaasad ah horomarinta iyo fursad siinta dhalinyarada wax barata hadana jecel kasoo muuqashada ciyaaraha kubbadda cagta Soomaaliya sanadii 2016 markii ugu horeesay xiriirka waxa uu bilaabay tartanka iskuulada oo ay ka qeyb galeen ilaa 12-iskuul oo ku yaala Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay ka qeyb qaadashada iyo horomarinta jiilka cusub ee mustaqalka la doonayo in ay wax badan ka badalaan kobaca kubbadda cagta Soomaaliya.
Saddex sano oo barnaamijka horomarinta dhalinyarada laga her geliyay caasimada Muqdisho madaxda xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya waxa ay Goobjoog u sheegeen in iminka ay diyaarinayaan qorshaha iyo dhisidda xiriiradda iyo kooxaha kubbadda cagta Maamul Goboleedyad si dhallinyarada gobolada ay iyagana u helaan horomarinta kubbadda cagta.
April 2018 17 ijir Soomaaliya ee ka qeyb galay tartankii kubbadda cagta Bariga iyo Bartamaha Afrika ee ka dhacay wadanka Burundi ayaa waxa ay galeen kaalinta 2aad ka dib markii xulka Tanzani ay guulo daro 2-0 ka kulmeen,yoolkeed taa fursad ceeynkee ayuu Ciyaartooyda kasoo baxaysa u yihiin kooxaha iyo Xulalka kala duwan ee kubbadda cagta Soomaaliya.
Xiriirka kubbadda cagta aduunka ee FIFA iyo kan qaarada Afrika ee CAf ayaa si weyn ula dhacsan abaabulka xoogan iyo dhisidda da’yarta,iyagoo Soomaaliya ku amaanay juhdigii da’yarta laga bixiyay dhalinyarada laga arkay tartankii 17-jirada Bariga iyo baratamaha Afrika 2018 waxayna balan qaadeen in ay arikan ay tahay mida kaliya uu wadanka kasto ku gaaro guul waaweyn ee dhinaca ka qeybgalka tartamada gudaha dalkiisa iyo caalamka.
Halkan ka daawo Warbixin ku saabsan Xiriirka Kubbadda Cagta dadaalka uu ku bixinao da’yarta